December 2021 – Page3– CELE WINGAGAR
ပရိသတျတဈဦးမှ လာမေးတဲ့ မေးခှနျးလေးတဈခုကွောငျ့ ရယျရခကျ ငိုရခကျတဲ့ အခွအေနနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ စိနျဖွိုးလှိုငျ
December 4, 2021 100million 0
ပရိသတျတဈဦးမှ လာမေးတဲ့ မေးခှနျးလေးတဈခုကွောငျ့ ရယျရခကျ ငိုရခကျတဲ့ အခွအေနနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ စိနျဖွိုးလှိုငျ ပရိသတျကွီးရေ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ မောငျအငယျဆုံး စိနျဖွိုးလှိုငျက တော့ သရုပျဆောငျ အလုပျကို အခြိနျအတျောကွာလုပျခဲ့ပွီး အခုခြိနျမှာတော့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေိုသာ လုပျ ကိုငျနတေော့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဆရာဝနျတဈဦးဖွဈပမေယျ့လ ညျး ဆေးကုတဲ့အလုပျကို ဝါသနာမပါတဲ့အတှကျ […]
မိဘတွေရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်း ကိုခံခဲ့ရတဲ့ မွေးကင်းစသမီးလေးတစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူမွေးစားစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်နှင်းေ ဝကတော့ ပရိသတ်တွေသိရှိတဲ့အတိုင်းပရဟိတအလုပ်တွေကို စိတ်ရောကိုယ် ပါနှစ်ပြီး စွမ်းစွမ်းတမံနဲ့ ဆောင်ရွက်ေ နခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ပါ။အ မှန်တကယ် စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကိုလည်းမိခင်စိတ်အပြည့်နဲ့ ခေါ်ယူမွေးစားကာစော ရှာက်နေခဲ့တဲ့အထိကို စိတ်ထားမွန်မြတ်လွန်း လှတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီနေ့မှာလည်း ခိုင်နှင်းဝေက နောက်ထပ်သမီးေ လးတစ်ယောက်ကို ထပ်မံခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပါသေး […]
ဒီနေ့ သူမရဲ့မွေးနေ့မှာ ပရိသတ်တွေဆီ ကနေ အမိုက်စားမွေးနေ့လက်ဆောင် တွေလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်….
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်ကတည်းကနေ ယနေ့အချိန်ထိ သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးချောတစ်ယောက် အနေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာလ(၄)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင်ကျော်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အသက် (၃၄)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သင်ဇာရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးအတွက်ကို သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့သူရဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကနေ […]
လဆေိပျမှာအဖမျးခံခဲ့ရပမေယျ့လညျး သားသမီးတှရှေိရာနိုငျငံသို့ ခကျခဲစှာသှားခဲ့ရပုံကို ရငျဖှငျ့ပွောပွလာတဲ့ သန်တာလှိုငျ
လဆေိပျမှာအဖမျးခံခဲ့ရပမေယျ့လညျး သားသမီးတှရှေိရာနိုငျငံသို့ ခကျခဲစှာသှားခဲ့ရပုံကို ရငျဖှငျ့ပွောပွလာတဲ့ သန်တာလှိုငျ ပရိသတျကွီးရေ မျောဒယျ သန်တာလှိုငျကတော့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ ရပျတညျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အာဏာရှငျလူတဈစုမှ ပုဒျမ၅၀၅(က) ဖွငျ့ တရားစှဲဆို အရေးယူခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ လအနညျးငယျ လောကျ […]
သူမဂေဟာက ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကျိုက်ထီးရီုးဘုရားဖူးပို့ပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
December 3, 2021 100million 0
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ပရဟိတမင်းသမီးကြီးခိုင်နှင်းဝေ ကတော့ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့ မှာ သူ့ရဲ့ရင်သွေးလေးမှာ ဂေဟာမှာ ကေ လးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ဝန်ထ မ်းတွေကို ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို ဘုရားဖူးလိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေ ကတော့သူ့ရဲ့ဂေဟာက ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ ကျိုက်ထီး ရိုးဘုရားမရောက်ဖူးတဲ့ […]
အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲလို က်ပြီဆိုတဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ပရိတ်သတ်အားအသိပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်စင်သီယာ
ပရိသတ်ကြီးရေ စင်ဒီယာကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်ေ တွရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် စ င်ဒီယာကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲ လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန် ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ စင်ဒီယာကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ […]
သူမကို ချစ်လားလို့ scarlett လေး ကိုမေးရာ ပြန်ြေ ဖလိုက်တဲ့စကားလေးကြောင့် မှင်သက်သွားခဲ့ရတဲ့ မေမေ မြတ်ရတနာကျော်.. (ဗီဒီယိုဖိုင်)
သူမကို ချစ်လားလို့ scarlett လေးကိုမေးရာ ပြန်ြေ ဖလိုက်တဲ့စကားလေးကြောင့် မှင်သက်သွားခဲ့ရ တဲ့ မေမေ မြတ်ရတနာကျော်.. (ဗီဒီယိုဖိုင်) ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မြ တ်ရတနာကျော်ကတော့ သီချင်းဗီဒီယိုလေးေ တွမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နာမည်ရအောင်မြင် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့  […]
ဇကေမ်ဘာဝနျးထဲက မီးလောငျတဲ့ကိစ်စနဲ့ ပတျသတျပွီး အထငျလှဲခံရသမြှကို ဘဝဟောငျးကဝဋျကွှေးလို့ပဲ မှတျယူပါတယျဆိုတဲ့ နန်ဒာလှိုငျခငျပှနျး ဇသေီဟ…
December 2, 2021 100million 0
သရုပျဆောငျ အကယျဒမီနန်ဒာလှိုငျကတော့ အိမျထောငျ ကပြွီးနောကျပိုငျး အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ လုံးဝ အလှမျးဝေးသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ရုပျရှငျမရို ကျကူးတော့ပမေယျ့ သူမရဲ့မိသားစုအကွောငျးနဲ့ ပကျသတျပွီး ပရိသတျတှကေ စိတျဝငျစားနကွေ ဆဲဖွဈပါတယျ။ နာမညျကွီးသူဌေးတဈယောကျ ဖွဈတဲ့ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ခငျပှနျး ဇသေီဟဟာ မနညေ့ က ဇကေမ်ဘာဝနျးထဲမှာမီးလောငျခဲ့တဲ့ စကျရုံနဲ့ပ ကျသတျပွီး အခုလိုပွောလာပါတယျ။“ဇကေမ် ဘာဝငျးလို့ […]
ပရိတျသတျတှေ သိခငျြ နတေဲ့ နိုငျငံရေး ရော ဘယျအရေးမှ မပါ ဝငျတဲ့အကွောငျးရငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ပွညျသူခဈြ မငျးသား မွငျ့မွတျ
မဂျလာပါ ပရိတျသတျကွီးရေ ပရိတျသတျတှေ သိခငျြနတေဲ့ နိုငျငံရေးရော ဘယျအရေးမှ မပါဝငျတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ပွညျသူခဈြ မငျးသား မွငျ့မွတျသရုပျဆောငျမငျးသား မွငျ့မွတျဟာ မကွာသေးခငျမှ သူရဲ့ ပရိတျသတျတှရေော ပွညျသူတဈရပျလုံးပါ မကွိုကျတဲ့ စကားဆိုခဲ့သော ကွောငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာ ပျေါမှာဝဖေနျမူ မြားစှာမွငျ့တကျ နပေါတယျ။ ဒီထကျပိုရှငျးပွဖို့ […]
တဈဦးတညျး သောမွေးဦးလေး ဖွဈတဲ့ အောနျဆိုငျးရဲ့သားလေးကို ယုယုယယ ခြော့သိပျပေးနတေဲ့ သူဌေးကွီးမိုကျကယျမိုးမွငျ့ရဲ့ဗီဒီယို….
မျောဒနျ အောနျဆိုငျးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားေ ပးမှုတှကေို သိမျးပိုကျရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈပါ တယျ။ သူမဟာ လကျရှိမှာတော့ သာယာကွညျနူးစရာကော ငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖနျတီးတညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အောနျဆိုငျးဟာ လကျရှိမှာတော့ ပွညျပနိုငျငံမှာ မိသားစုနဲ့အတူ နထေိုငျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။မကွာသေးခ ငျက သားဦးလေး မှေးဖှားထားတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ […]